Cishe wonke umnikazi saqala iwebhusayithi ifuna ukwazi ukuthi ukuthuthukisa iwebhusayithi, ngoba okokuqala Ngifuna ukuzama into bebodwa. Uma - lena umnikazi imfundamakhwela, sizobe ukuthi indlela yokwenza izivakashi babe okuningi ngaphandle kokungenela yabanye.
Isihloko esilandelayo sizoyiphendula le ukuchaza izinsika ezimbili ukukhuthazwa e izinjini. Kulaba izimali, uzodinga dollar ambalwa ngenyanga.
Abaningi SEO-optimizers namanje siphikisana Iziphi izici ezisiza ukwanda isayithi kuya phezulu futhi lapho kukhona lutho, futhi kanjani ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho ngokwakho. Okwamanje, singene "wilds" musa batusa - ngokwanele ukuba sazi ukuthi iNkosi Indlovukazi zonke SEO - isihloko isixhumanisi.
Isihloko (ku-HTML yomdwebo tags esiqokiwe ... ) - isihloko sekhasi, ukuthi ekhasini search umsebenzisi ubona ngesimo link. Lona "igama" lisitshela ukuthi ungafunda ubone ekhasini inikezwe. Kulesi inhlanganisela amanga lawo mazwi, ozosithola abasebenzisi.
Kusiphequluli sakho, ungathola phezulu ekhasini. Khumbula ukuthi uma unentshisekelo kanjani ukukhuthaza isayithi ngokwakho, futhi ufuna ukuthola Chile esikhathini esizayo, akusiyo "ukusongela" kuya imibuzo ephezulu imvamisa. Ungakwazi ukukhokhela ukuba angokhiye inani lezicelo akuyona ezingaphezu kuka-200 ngenyanga - ukunquma inani ungakwazi wordstat.yandex.ru kalula esizeni.
Kufanele ukukhiqiza ukuhlaziywa ikhasi, okuyinto okumele unwound, bese ukhetha amagama angokhiye. Hlola ukuvama kwazo kwi service ngenhla, ukhetho best - 30-50 izicelo ngenyanga. Khona-ke uyobona kahle umphumela isobala. Ukuzindla kanjani ukukhuthaza isayithi ngokwakho, khumbula ukuthi elisemqoka kufanele ibe ekuqaleni kwesihloko. Igama oda kubalulekile. Uma ubeke igama lenkampani kwasekuqaleni, lenzani umonakalo owengeziwe umthombo efomini injini rankings. Okungabalulwa, isibonelo, inkampani "Audi", okuyinto uthengisa izimoto Audi.
Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kwekhasi babe ukufanisa isihloko sakho. Umsebenzisi kwehle kahle, funa umakhalekhukhwini, futhi wathola vacuum cleaner omkhathi, futhi nakanjani ngeke ibe ikhasimende lakho. Kwakungenxa mayelana nendlela ukukhuthaza isayithi ngokwakho mahhala. Khona-ke sizokutshela indlela lapho indawo yakho "uphakeme" in the yelucwaningo for a dollar ambalwa ngenyanga.
Awukwazi ngempela ukwenza lutho ngaphandle izixhumanisi zangaphandle kusayithi lakho kusuka kwamanye amasayithi - uma umbhalo isixhumanisi kuyafana ne amazwi okuqala aleyo isihloko, umphumela ubizwa ngempela kuthathe isikhathi eside, ngoba "amandla optimizatorskih" kabili. Isevisi engcono kulesi siqondiso kuyinto Blogun. Ngemva kokuchitha u- $ 5 ngenyanga ngemibuzo ongaphakeme-imvamisa, uzobe wesilisa kusimangaze, ngoba umbuzo kanjani ukukhuthaza kakhulu kusayithi, yaxazululeka!
Khumbula cardinal umthetho SEO - ". Isixhumanisi sangaphandle + isihloko Cabangisisa + angukhiye embhalweni = Impumelelo"
Kodwa ngeshwa, lisha wedwa angenza kuphela izinyathelo kuqala. Enye into - ngosizo ochwepheshe. Ukusebenza inkampani yethu Mrise, uzothola iseluleko kuwo wonke amasevisi ngaphambilini kuthiwa, ungakwazi kalula ukukhulisa isayithi lakho phezulu hhayi kuphela imibuzo ongaphakeme-imvamisa - konke ezandleni zakho!
Ukuhambisa isayithi yakho ku-Google akulula, kodwa silula
Promotion kanye nokwenza
Indlela yokusebenzisa imfanelo rel = "nofollow" - izimfihlo SEO
Ukusebenzisa ngokugcwele injini nokukhuphula ezikhundleni amasayithi e Kiev
Senhliziyo somoya: izimpawu izimbangela
Recipe ukupheka meringues, nezindlela ehlukahlukene
Indlela benza intombazane ukunikela kwakhe ukukhumbula konke ukuphila kwakho?
Mercedes C 180 - nokwethenjelwa nokuqashelwa
Amafilimu angu-10 aphezulu ukuthi umhlaba
Abaklami LEGO, esibekela ukuthenga ingane